Usuku lukaZwelonke luyeza ~ Umthendeleko weNtwasahlobo awukho mva_News_Zhongshan Xiangdi Lighting Co, Ltd.
Iintyatyambo zasentwasahlobo, ukuthotywa kwehlobo, ukwanda kwekwindla, ikhephu lasebusika,
I-Golden Autumn kaOkthobha ... Ixesha 荏苒 ~ Umthendeleko weNtwasahlobo awuyi kuba kude!
Umthendeleko weNtwasahlobo awukho kude.I2019 yeTshayina eNyaka eNtsha yi-2019 2 inyanga yeNyanga ye-5, usuku lokuqala lwekhalenda yenyanga, Lwesibini. Kukho iinyanga ezine esele, kwaye ukuqaqamba kwamehlo kuza… Ngaba ukhe wacinga ngalo nyaka ... Nguwuphi umbala wombhiyozo weNtwasahlobo engqondweni yakho? Makhe sijonge kwakhona ekukhanyisweni kweminyaka edlulileyo.Njani umbala esasinawo kuMthendeleko weNtwasahlobo, kwaye loluphi uhlobo lwemifanekiso entle eshiyekileyo? ~ ~ 睁大 眼看 吧 ~
I-Longfeng Chengxiang - Isithili se-Qingcheng
Ukuphakama okuphelele kweemitha ze-18 zeedragons ezindizayo kunye namaphiko e-phoenix enemibala ejikeleze iBeijiang Pearl yeDragon kunye nePhoenix Chengxiang iphumelele indawo yokuqala, ngqo yabamba intliziyo yethu enononophelo ~
Iphupha Lizaliseke-Jiangbin Park Jiangxin Island
Iqela le10 elikwisiqithi seJiangxin lizele bubuchwephesha bemeko yezibane, ekuthabathela kuwo wonke umhlaba kwindalo iphela!
Ithamsanqa leNhlanhla yoNyaka oMtsha - uFeilaihu Square
I-15x6 yeemitha eziphakamileyo ezintle iinyani zekhathuni, iibane ezintle kunye ezimibalabala ziluphumelele uvuyo lwabazali abaninzi, kwaye bezise umntwana wabo omnandi ngexesha lezibane, kunye neWangwangwang!
URhulumente weSithili ococekileyo
Izibane ezinemigca mithathu zibonisa iintyatyambo ezintsha zasentwasahlobo, imeko ecacileyo nephilayo yeentaka kunye neentyatyambo, kwaye ziphumelele indumiso kubamelwane.
Umxholo wokuqina wesizwe udityaniswa nejimthriyam, unodoli wekhathuni omnandi u-2 iimitha eziphakamileyo ezidityaniswe nomzobo wokuqala, wakwabamba nezinto ezininzi ezithandwa ngabamelwane.
Inqanaba lamakhulu amanqanaba
Ifashoni emnandi kunye nenemigca emnandi ye-archway yokudibanisa imilinganiselo yamanqanaba emilinganiselo ye-100 yokudala umoya woNyaka oMtsha, ukuzisa incasa yonyaka opheleleyo kubumelwane beleveli yamanqanaba ayi-100.
Umthendeleko weSantane weLantern Idatha enkulu
Umnyhadala weNyanga eNyanga eNyanga enesiqingatha somthendeleko utsale amashumi amawaka abakhenkethi.Izibane zikwindawo ezinomfanekiso weQingcheng kunye neQinghai, kwaye abantu abavela kuzo zonke iindlela zobomi bakho kuyo yonke indawo!
Umnyhadala weLantern ugxile kakhulu ekuthatheni inxaxheba nasekusebenzisaneni, ukudibanisa izinto zesintu nezanamhlanje ukutsala abantu abancinci ukuba bathathe inxaxheba. Ngokwedatha, ngexesha lomsitho, umyinge wabantu abathathe inxaxheba kwimisebenzi eGuangdong yayiphezulu njenge75%.
Imizobo yamagxa omsitho, wakhanyisela isibhakabhaka sasebusuku somthendeleko, lwaba ulwandle lovuyo. Isibane sonyaka seNtwasahlobo sisiseko soNyaka oMtsha we-Qingyuan, kwaye ikwayieperile zobugcisa ezifihlwe apha. Izibane zonyaka zibanjwa ngokungathi ziza kubhiyozela isivuno kunye nomnqweno wobomi obungcono, kwaye zibonisa neempawu ezizodwa zabantu.
Akukude kuNyaka oMtsha ~ Dibana nolonwabo lwakho!